Home News Uhuru Kenyatta oo kala diraayo Golahiisa Wasiirada
Uhuru Kenyatta oo kala diraayo Golahiisa Wasiirada
Madaxwaynaha Kenyatta ayaa u muuqda inuu kala diri Doono golaha wasiirada Jimcaha 21st December 2018, taasina waxay raacaysaa ogeysiis ku saabsan xoghayaha golaha wasiirrada, qareenka guud iyo dhammaan xoghayayaasha guud.
Magaca sare ee magaciisu ku qoran yahay ayaa lagu amray inay dhiibaan magacyada saraakiisha sare oo masuul ka noqon doona.
Waraaq loo diray xafiiska adeegga dadweynaha saraakiisha dawladda ayaa lagu amray in aysan ka baxin dalka.
Previous articleWar Deg Deg ah:-Al-shabaab oo sheegtay in ay burburin doonto Dagaalamayaasha Al-qaacida ee Soomaaliya joogta!!
Next articleDagaal xoogan oo ka dhacay Gobolka sh/dhexe
[SAWIRO] Ciidamo hubeysan oo la wareegay xaafado ka tirsan Beledweyne
Somali military nabs senior al-Shabaab militant
Baarlamaanka Hirshabelle oo goordhow aqbalay Mooshin ka dhan Madaxweyne Waare (Akhriso)